Matabaan oo ku talaabsaneyso horumar xagga amniga iyo bilicda ah “Sawirro” « AYAAMO TV
Matabaan oo ku talaabsaneyso horumar xagga amniga iyo bilicda ah “Sawirro” by Maamule b 1 of 1
1412 Views Date March 8th, 2014 time 6:40 pm
Degmada Matabaan oo ka mid ah Degmooyinka Gobolka Hiiraan ee ku jirta gacanta Maamulka Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira Amni buuxa iyo horumaro dhinaca nolosha ah, iyadoo ay halkaasi gaareen ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaan ciidamada Jabuuti.
Maamulka iyo Qeybaha Bulshada oo la hadlay Tvga Qaranka ayaa sheegay in Degmada Matabaan ay muddo kooban ku talaabsatay horumaro la taaban karo.
Guddoomiyaha Degmada Matabaan Maxamuud Xasan Cali ayaa ayaa hoosta ka xariqay in xaaladda amniga ay tahay mid aad u wanaagsan, islamarkaana la isku haleyn karo amniga magaalada.
Taliyaha Nabad sugida Degmada matabaan ee Gobolka Hiiraan Axmed Cabdi Raage ayaa sheegay in Degmada uu ka jiro ammaan buuxo oo la isku haleyn karo, isagoo intaasi ku daray in hadda cid ka baqeyso in xaalad amni daro loogu geysto degmada aysan jirin.
Taliyaha Saldhiga Booliska ee Degmada Matabaan Xasan Maxamuud Xirsi ayaa isna dhankiisa sheegay in Booliska iyo Saldhiga Degmaduba ay shaqeeyaan oo si toos ah hada dacwadaha madaniga ah loogu qaado saldhiga Booliska ee Degmada Matabaan, isagoo intaasi ku daray in Booliska Degmadu ay ka shaqeeyaan deegaanno badan oo hoos yimaado degmada.
Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Degmada Matabaan Cabdiraxmaan Cawil Abshir ayaa Tv-ga Qaranka u sheegay in kan urur ahaan ay degmada ka sameyaan howlo badan oo horumarin ah sida wacyi galinta Dhalinyarada iyo ka qeyb qaaradashada Nabadda.
Dadka degmada Matabaan inkastoo adeegyo badan ay weli ka dhiman yihiin adeegyadii aas aasiga u ah bulshada ayaa hadana waxaa la dhihi karaa waa degmo ka socoto horumar waxayna Maamulka iyo qeybaha Bulshada ee Degmadaasi ku dhaqan ay ka codsadeen Maamulka Gobolka Hiiraan, Dowlada Federalka Soomaaliya, Hay’adaha iyo Jaaliyadaha in laga qeyb qaato sidii gacan looga siin lahaa Dadka Deegaanka kor u qaadista iyo taakuleynta Horumarka balaaran oo ay ku talaabsaneyso degmada Matabaan.